प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०७, २०७४ समय: ९:४२:०७
काठमाडौं, ७ माघ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच तालमेल हुने भएको छ । उम्मेदवारी मनोनयनअघि नै तालमेलको टुंगो लगाउने गरी तीनै दल शनिबारबाटै गृहकार्यमा जुटेका छन् ।माघ २४ गते हुने निर्वाचनका लागि बुधबार उम्मेदवार मनोनयनको कार्यक्रम रहेकाले सोमबारसम्म उम्मेदवारी टुंगो लगाउने तयारी रहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । बालुवाटारमा शनिबार बसेको तीन दल बैठकमा कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले ५६ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा वाम गठबन्धन ४२, कांग्रेस १० र फोरम-राजपाले ४ सिट जित्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।
चुनावी सहकार्यका विषयमा भएको छलफलले सोमबारसम्म अन्तिम रूप पाउने कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बताए । राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेश सरकार गठनलगायत विषयमा तीन दलबीच प्रारम्भिक कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश २ र अन्य प्रदेशमा के-कसो गर्ने भन्ने अनुमानित तथ्यांकमा गृहकार्य अघि बढेको हो । आइतबार एजेन्डागत रूपमा छलफल हुनेछ’, उनले भने।
मिलेर चुनाव लड्दा प्रदेश २ मा धेरै सिट हासिल गर्न सकिने निष्कर्षसहित आइतबार निर्णायक वार्ता गर्न लागिएको फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘मुलुकको विद्यमान राजनीतिक र राष्ट्रियसभा चुनावको विषयमा सामान्य छलफल भए पनि टुंगो लागेको छैन । आ-आफ्नो दलमा परामर्श गरी आइतबार पुनः बस्ने निर्णय भएको छ’, श्रेष्ठले भने । राजपा महासचिव केशव झाले बैठक सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रियसभामा मधेसी र कांग्रेसबीच चुनावी एकता निकट छ’, उनले भने ।
वाम गठबन्धनले पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ का ६ सिटमा फोरम-राजपासँग तालमेल गर्न चाहेको छ । यस प्रकारको वार्ता राजपाका नेता राजेन्द्र महतोमार्फत भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेश २ बाहेक १, ५ र ७ मा पनि मधेसी गठबन्धनमा आबद्ध दुई दलका केही मत रहेकाले यस्ता मतले उनीहरू आफैंले कुनै सिट नजिते पनि कांग्रेसलाई केही सिट दिलाउन सक्ने भएकाले फोरम-राजपालाई प्रदेश प्रमुख दिएर खुसी पारेको दाबी कांग्रेसका नेताहरूको छ ।
कांग्रेसले दुई मधेसवादी दलका साथै नयाँ शक्ति पार्टी र राप्रपासँग सहकार्य गरेर राष्ट्रियसभामा केही सिट थप्ने रणनीति लिँदै ती दलका नेतासँग पनि अनौपचारिक वार्ता थालेको छ । शनिबार भएको तीन दलीय वार्तामा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, डा. रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, उमाकान्त चौधरी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना, फोरमबाट राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसहाय यादव र रेणु यादव, राजपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, वृजेशचन्द्र लाल र केशव झा सहभागी थिए ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रदेश १ वाम गठबन्धन- ६, कांग्रेस -२,
प्रदेश २ वाम गठबन्धन- २, कांग्रेस- २ र राजपा- ४
प्रदेश ३ वाम गठबन्धन- ६, कांग्रेस – २ (तालमेल भए)
प्रदेश ४ वाम गठबन्धन- ६, कांग्रेस – २
प्रदेश ५ वाम गठबन्धन- ६, कांग्रेस – २,
प्रदेश ६ वाम गठबन्धन- ८, कांग्रेस – ०
प्रदेश ७ वाम गठबन्धन- ६, कांग्रेस -२